कोरोना र बाल सुरक्षा | Shirish News
कोरोना र बाल सुरक्षा
विश्वमै महामारीको रुपमा फैलि रहेको कोराेना भाइरस (covid-19)का कारण विश्व अहिले जटिल माेडमा पुगेको छ।काराेना सङ्क्रमणले विज्ञानलाई नै चुनाैती दिइ रहेको छ। दिन प्रतिदिन लाखाै मानिसहरुले ज्यान गुमाइ रहेका छन्।
यस्ताे अवस्थामा नेपालले पनि यसको प्रत्यक्ष सामना गरिरहेको छ। नेपालमा पनि सम्भावित कोराेना सङ्क्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले करिब २ महिना अघिदेखि लकडाउन गरिएको छ। तथापि लकडाउनको उपयुक्त किसिमको पालनामा चुक्नाले,अन्य सावधानी नअपनाउनाले कोराेना क्रमशः आफ्नाे सिंढी(चरण) उक्लदै गइरहेको छ।लकडाउनको विकल्प पनि छैन। आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक,शैक्षिक सबै क्षेत्रमा यस भाइरसको असर त छदै छ यी बाहेक अन्य थुप्रै अप्ठ्यारा अवस्थाहरुको पनि सिर्जना भएको छ। अहिले देशले भाेगिरहेको याे सङ्कटबाट उत्पन्न मानसिक तनाव धेरैले महसुस गरिरहेका छन्। यस मानसिक तनावको असर कतै तपाइँका बालबच्चाहरुलाई परि रहेको त छैन? आफ्ना बालबच्चाहरुले पाउने पारिवारिक वातावरण पाएका छन त? उनिहरुले आफुलाई शारीरिक मानसिक रुपमा सुरक्षित महसुस गरि रहेका छन् त ? के हामीले उनीहरु अनुकुलको वातावरण सृजना गरी आफ्नाे दायित्व निर्बाह गरेका छाै त ?
यति बेला कयाै बालबालिकाहरु आफ्ना परिवारसँगै क्वारेन्टाइनमा बसि रहेका छन्। कोराेना सङ्क्रमणको मनाेत्रासबाट सिर्जना भएका पीडादायी क्षणहरु नियाली रहेका छन्। कपाेलकल्पित रुपमा फैलाएका अफवाहहरु वा यथार्थिक कारुणिक दृष्यहरुले बालबालिकाहरुको मनाेविज्ञानमा के कस्ताे असर परेको हाेला? कोराेनाले निम्त्याएको सङ्कटले धेरैअभिभावकहरु स्वयं मानसिक तनावमा छन्। त्यसमाथि जताततै भाइरसको बारेमा चर्चा हुनु, हिडडुल गर्न नपाउनु ,साथीसंगी आफन्त सँग टाढा रहनुले त झन् एक्लाेपन र बन्धनको महसुस गरी बालबालिकामा मानसिक समस्या देखापर्ने खतरा रहन्छ। यदि उनीहरुमा यहीअवस्था लामाे समयसम्म कायम रहेमा उनीहरुको सृजनशीलता ह्रास आउने कुरालाई नकार्न सकिदैन। यस्ताे अवस्थामा हरेक अभिभावकहरुले उनीहरुलाई सकारात्मक प्रेरणा दिने, जीवनोपयाेगी, रचनात्मक सीपहरु सिकाउने, घरको वातावरण मनाेरन्जनात्मक वनाउने आफ्नाे तनाव उनीहरु सामु प्रकट नगर्ने जस्ता भुमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ।
केहि अपराधिक मानसिकता बाेकेका ब्यक्तिहरुबाट बन्दाबन्दीको गलत फाइदा उठाउदै भैरहका वा हुन सक्ने अपराधजन्य कार्यबाट उनीहरुको संरक्षण गर्नु झनै ठूलाे चुनाैती देखापरेको छ।लक डाउनको अवधिमा सिविनद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइनहरुबाट ४१२ जना बालबालिकाको उद्धार भैसकेको छ।
यसै गरी १६ जना बालिकाहरु यौन दुर्व्यवहार र शाेषणमा परेका छन्।भने ३८ जना बालबालिका हिंसाको सिकार र २०जनाको बालविवाह भएको पाइएको जनाइएको छ। यस्ताे अवस्थामा उनीहरु माथि हुनसक्ने दुर्व्यवहार साथै शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यबाट उनीहरुलाई जाेगाउनको लागि सम्पूर्ण सराेकारवालाहरु जिम्मेवार हुनुपर्दछ। उनीहरुको सुरक्षित जीवन र उज्यालाे भविष्यको लागि जागरुक हुनु जरुरी छ। हरेक अभिभावकहरुले आफुलाई जिम्मेवार ठान्नु जरुरी छ।
बालबालिका समाजका एक अभिन्न अंग भएका कारण समाजमा हुने घटना, परिवर्तनबाट उनीहरु एकदमै अलग हुन सक्दैनन्। त्यसैले यस्ता कुराहरुका बारेमा बालबालिकाहरुले सही जानकारी पाउनु पर्दछ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई नकारात्मक असर पर्ने कुराहरुबाट जाेगिने उपायहरु निकालि दिनु पर्छ। सम्पूर्ण विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु पुर्ण रुपमा बन्द रहेको अवस्थामा आफ्ना बालबच्चाहरुको दिनचर्या, उनीहरुको मनाेगत अवस्था, सामाजिक सुरक्षाको पनि ध्यान राख्नु जरुरी छ। चञ्चले स्वभावका बालबालिकाहरुलाई एकै ठाँउमा बसि रहन गाह्राे हुन्छ। यस्ताे बेलामा उनीहरुलाई उचित किसिमले परामर्श गर्न सकेनाै भने परीणाम अस्वभाविक आउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।
विश्व स्वास्थ संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा सम्बन्धी उपायहरु पुर्ण रुपले पालना गर्नु गराउनु हरेक अभिभावकको कर्तव्य हुन आउँछ। कोराेनाको सन्त्रास बाट उत्पन्न मनाेबैज्ञनिक डर बालमस्तिष्क रह्न सक्छ। त्यसकारण यस्ताे अवस्थामा उनीहरुलाई एक्लै नछाेड्नुस् तपाईको अनुपस्थितिमा उनीहरुले अझै आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। बालबालिकाहरुको मनले सँधै साथी खाेजी रहेको हुन्छ।
आफ्ना मनका कुरा पाेख्ने ठाउँ नपाएमा झन उनीहरुमा चिन्ता र तनाव बढ्न जान्छ। यस्ताे अवस्थामा तपाइँ उनीहरुको मनाेभावना बुझ्न सक्ने साथी बन्न सक्नुपर्छ। ज्ञानवर्ध्दक पुस्तकहरु पढ्न मन गर्दछन् भने त्यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। याे समय बच्चाहरुलाई पढाइ मात्र नभएर उमेर अनुसारको नैतिक तथा जीवनाेपयाेगी शिक्षा दिने काममा अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
बालबालिकाहरुको मनाेबैज्ञानिक त्रास हटाउनको निम्ति याे समयलाई तपाइँ कसरी सकारात्मक रुपमा प्रयाेग गर्न सक्नु हुन्छ त्यसको खाेजी गर्नु हाेस। व्यस्त दैनिकीका कारण परिवारसँग समय विताउन नपाउनेहरुले याे समय महत्त्वपूर्ण अवसरकोर रुपमा प्रयाेग गर्न सक्नुहुनेछ। यतिबेला आफ्ना बालबच्चाहरु प्रति चिन्ता र चासाे राख्नु अत्यावश्यक छ। याे सुनाैलाे माैका पनि हाे। याे अवसरको भरपुर उपभाेग गराै एक जिम्मेवार अभिभावक हुनुका नाताले तपाइँले लकडाउनका कारण आगामी दिनमा आफ्ना बालबालिकाहरुले सिकेका जानेका र बुझेका कुराहरु बिर्सिए भन्ने अवस्था आउन दिनुहुदैन।
बालबालिकाहरुको सुरक्षा गर्नु, व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्यका निकाय, नागरिक समाज आदि सवैको दायित्व हाे। बालबालिका बालबालिका कै रुपमा रहनु पर्दछ। उनीहरुलाई बाल बयस्क बनाइनु हुदैन बालबालिकाहरुको प्रमुख काम सुरक्षित बालापनमा रम्दै शिक्षा आर्जन गर्नु, ज्ञान, सिप सिक्नु, भविष्यमा एक स्वावलम्बी नागरिकका रुपमा उभिन सक्ने गरी तयार हुनु हाे।
(दीपा बराल,शान्ति निकेतन मा.वि. सिपाडोल,भक्तपुर मा कार्यरत शिक्षिका हुन्)
Tags: कोरोनाबाल सुरक्षा